SOMALITALK - MUQDSIHO
Waa sidee Xaaladda Ammaan ee Muqdisho 14 Sanno oo Fowdo ah. Kadib.
Qaramadda Midooabay oo ka dalbatay Kooxaha Soomaalida inay si deg deg ah ku soo dhistaan Dawlad Ku Meel Gaar ah.
Lixda Wasiir Arrimo Dibadeed ee IGAD oo 21-ka Bishan ku kulmaya Nairobi.
Milatarigii Hore ee Soomaaliya oo door ku yeelan doona Hawlaha Golaha Ammaanka ee Midowga Afrika ka samaynayaan Somalia.
Magaaladda Muqdisho oo 14 kii Sanno ee ugu dambeeyay ahayd Magaalo ay ku kortay Nidaam daradda iyo Fowdada ayaa Bilihii ugu dambeeyay waxaa isbadal wayn uu ku yimid Amaanka Caasimadda. Waxaana soo baxay Maxaakiim Islaami ah dagaal ba’an kula jira Burcadii Afduuban jirtay Dadka isla markaana dhici jirtay Shacabka Rayidka ah.
16 Degmo ee Gobalka Banaadir ayaa haatan waxaa ka hawl galla Ciidammo Illaalo ah oo samaysteen Xaafaduhu. Waxaana Ciidamadaasi gacan ay ka helaan Qaybaha kala duwan ee Bulshadda.
Maxkamadaha Islaamiga ah ee Muqdisho waxay Samaysteen Dallad ay ku midaysan yihiin. Waxayna billaabeen inay Mideeyaan Ciidamadooda si ay hawl galladda si isku mid ah u fuliyaan. Iyagoo Shalayna soo furtay Labo Nin oo in muddo ah Afduub loogu haystay Magaaladda Muqdisho.
Dadwaynaha Gobalka Banaadir ayaa si wayn u soo dhaweeyay Tallaabadda ay Maxkamadaha Islaamiga ah ku soo bad baadiyeen Labadaasi Nin. Waxaana ay Dadwaynuhu ku doodeen in haddii la sii waddo Taageeradda la siiyo Maxaakiimta Islaamiga ee Muqdisho ay sii hagaagi karto AMmaanka Caasimadda.
Hawlgalladan ay sida wadajirka ah u samaynayaan Maxaakiimta Islaamiga ah ee Muqdisho ayaa haddii uusan hakad ku imaan waxay wayn ka tari karaan Ammaanka Caasimadda.
Koffi Annan ayaa ka codsaday Kooxaha Soomaalida inay soo dhamaystiraan Hanaan Dawladnimo oo ay Soomaaliya yeelato ka hor Bisha July.
Warbixin Annan uu ku soo saaray Arrimaha Somalia ayuu ku sheegay inay lagama maarmaan tahay inay Hogaamiyayaasha Kooxuhu ay dareemaan Dhibaatadda ku habsatay Shacabka Soomaaliyeed ayna soo dhistaan Dawlad Ku Meel Gaar ah ugu dambayn Dabayaaqadda Bisha July. Wuxuuna sheegay in door muuqdaa oo uu Golaha Ammaanku ku yeesho Arrimaha Somalia ay taageero u noqon karto Geedi Socodka Nabadad ee Soomaalida.
Warbixinta Annan waxay ku dhaliilaysaa Siyaasiyiinta Soomaalida, iyo Ganacsatadda ee samaystay Ciidamadda iyo Tiknikadda kuna qabsaday Dhul aysan u dhalin ay yihiin kuwa ka soo horjeeda Nidaamkii iyo Kala dambayntii oo dib loogu soo celiyo Somalia.
Annan waxa uu Warbixintiisa ku sheegay in in deegaanadda hoos tagga Punt Land ay yihiin goobaha ugu badan ee ay deegaanka ka dhigtaan Qaxootiyadda ka soo barakacay Gudaha Dalka. Wuxuuna sheegay inay Boosaaso oo kaliya joogaan 25,000 oo Qaxooti Soomaaliyeed ah. Iyadoo Shaqaalaha Samafalkana uu sheegay inay kala kulmaan Soomaaliya Qatar wayn oo dhinaca Ammaanka ah.
Annan waxa uu ku ammaanay Soomaalidu inay horumar wayn ka gaareen Ganacsiga. Iyadoo dalkooda ay ka jirto Fowdo iyo Nidaam la’aan. Wuxuuna sheegay inay samaysteen Bankiyo aan toos ahayn. Jaamacado. Xarumo Waxbarasho iyo Isgaarsiin Casriya.
Annan waxa uu ugu baaay Beesha Caalamka inay si deg deg ah uga so jawaabaan Dalabkii Hay’adaha Samafalka ee ay ku doonayeen 119 Milyan oo Doolar. Wuxuuna ka dalbaday deeq bixiyayaasha Caalamka inay bixiyaan Dhaqaalahaasi si loogu fuliyo Soomaaliya Mashaariic Horumarineed.
Wasiiradda Arrimaha Dibadda ee Lixda Dal ee IGAD ayaa la filayaa inay 21 ka bishan ku kulmaan Magaaladda Nairobi oo uu ka socda Shirka Soomaalida oo haatan galay Wajigiisii Saddexaad,
Kulankan oo looga gol leeyahay in lagu dar dar galiyo Wadahadaladda Soomaalida uga socda Kenya ayaa la filayaa inay ka soo qayb galaan Lixda Dale e IGAD. Waxaana ay ku dhawaaqi doonaan go’aano ay ku dar dargalinayaan Shirka Soomaalida. Iyagoo kulamo la yeelan doono Beelaha Soomaalida.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya ayaa dadaal xoogan ugu jirta inuu qabsoomo Kulankaasi. Waxaana ay Casuumaado u kala dirtay Wasiiradda IGAD.
Wasiiradda ayaa marka uu dhamaado Kulankooda waxaa la filayaa in qaarkood ay ku haraan Madasha Shirka si ay u dardargaliyaan Wajiga Saddexaad ee Shirka. Iyagoo Soomaalida kala shaqayn doona sidii ay u soo xuli lahaayeen Xubnaha Baarlamaanka Ku Meel Gaarka ah ee Somalia.
Golaha Ammaanka ee Midowga Afrika ayaa loo gudbiyay Liis ay ku qoran yihiin Saraakiil Soomaaliyeed oo kala shaqayn doona Golaha Ammaanka ee Midowga Afrika Qaabkii Soomaaliya Hubka looga dhigi lahaa.
Guddi Horay Hub ka dhigista Soomaaliya loogu magacaabay Shirkii Eldoret ee Kooxaha Soomaalida ayaa soo magacaabay Saraakiishan. Waxaana Tiradda Saraakiishan lagu sheegay 32 Sarkaal.
Saraakiishan oo ka tirsanaan jiray Milatarigii hore ee Somalia ayaa la sheegay in soo xulidooda lagu saleeyay qaab Beeleed. Waxaana loogu qaybiyay Beelaha Soomaalida qaabka ay u kala dagaan Gobaladda Dalka.
Saraakiishan ayaa laga sugayaa inay soo diyaariyaan Hanaankii Soomaaliya ay uga hawl gali lahaayeen Ciidamo Ajaaniib ah. Waxaana laga rabaa Xubnaha inay soo daraaseeyaan Qaabka Soomaaliya Hubka looga dhigi karo. Iyagoo marka ay soo dhameeyaan Daraasoodkooda tagi doona Addis Ababa halkaasoo ay kulan kula yeelan doonaan Khuburo Afrikaan ah oo ay ka wada tashan doonaan Qaabka Soomaliya Hubka dhigis looga samayn karo.